WhatsApp - Androidsis | Gam akporosis
WhatsApp bụ doro anya na ndị kasị ewu ewu nzi ozi ngwa n'etiti niile gam akporo ọrụ. Ngwa nke na enye anyi ohere isoro ndi enyi, ndi oru ibe anyi ma obu ezin’ulo anyi kwurita okwu n’enweghi nsogbu. Yabụ, ọ nwere ụdị nke ya, ebe ị nwere ike ịmata ihe niile gbasara ngwa ahụ.
Ga-enwe ike ịchọta ozi niile, aghụghọ ma ọ bụ nkuzi banyere WhatsApp na ngalaba a. Nke mere na ị maara ihe na-eme na ngwa, mbata nke ọhụrụ ọrụ ya ma ọ bụ aghụghọ na nke i nwere ike mma iji ya na gị gam akporo ekwentị. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa ahụ ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere ya, ụdị a bụ ezigbo ebe ị ga-aga.
Otu esi ede mkpụrụedemede nwere agba na WhatsApp
Ọtụtụ ijeri mmadụ gburugburu ụwa na-eji WhatsApp dị ka isi na naanị ụzọ ha na ndị ọzọ na-ekwurịta okwu ...
Nnyocha na-enye anyị ohere ịmata echiche, mmasị, mmasị ... nke ọtụtụ ndị dabere na usoro ajụjụ. Ee…
Otu esi ezipu ọnọdụ adịgboroja na WhatsApp maka gam akporo
por Edere Ferreno eme 3 izu .
WhatsApp bụ ngwa ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu na gam akporo. N'ime ngwa a, enwere ike izipu ozi, faịlụ ma ọ bụ ...
Enweghị m ike ibudata audios WhatsApp: ihe m ga-eme
por Edere Ferreno eme 1 ọnwa .
WhatsApp bụ ngwa izi ozi kacha mma maka ndị ọrụ gam akporo. N'ime ngwa a, anyị na-ezigakarị ozi na ...
N'ezie, ihe karịrị otu oge, ọ gaferela n'uche gị iziga mmadụ ozi ...
Ihe kpatara nwere ike iduga anyị izobe kọntaktị na WhatsApp bụ ihe dị iche iche ma dabere, na ...
Egwuregwu a ga -egwu na WhatsApp
Egwuregwu site na WhatsApp aghọọla ejiji maka afọ ole na ole ugbu a. Ụdị ha dị iche iche ...
Emeela ọtụtụ nke WhatsApp ọtụtụ ngwaọrụ nkwado na izu ndị na-adịbeghị anya. Mgbe izu ole na ole na-eche, ọ bụ ya ...
por Ignacio Sala eme Ọnwa 7 .
Ma anyị masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị anyị, ozi WhatsApp abụrụla usoro nkwukọrịta akụrụngwa kachasị ...
por Ignacio Sala eme Ọnwa 8 .
Asing bawanye font size na WhatsApp Web ma ọ bụ ozugbo na ngwa gam akporo, bụ otu n'ime…
Black WhatsApp, Telegram Black na ngwa ndị ọzọ gbanwere maka AMOLED